बगैचा उद्यान | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: बगैंचा बगैचा
कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोस् जसले फूल र पौधों को एस्पिपो एल। ए देखि खरीदा कि म एक ठूलो राशि को आदेश दिए, मलाई डर छ कि म धोखा जाएगा
कृपया मलाई बताउनुहोस् कि कसले एसिपोवा एल। बाट फूल र बोटबिरुवाको बिरूवा किनेका थिए। म ठूलो रकमको आदेश दिन्छु, उनीहरू डराउँछन् भन्ने कुरामा मलाई डर छ। जब यो 100% प्रीपेमेन्ट मैले पहिले नै लारिसा एसिपोवाको नर्सरीमा १००% बनाउँछु भने यो एकदम संदिग्ध हुन्छ ...
बीज "पोइस्क", "एलिता", "गाभ्रिस", इत्यादि - कुन चाहिँ उत्तम छ? उदाहरणका लागि, यदि फूलको बीउ, कुन एक लिन राम्रो छ?
बीज "पोइस्क", "एलिता", "गाभ्रिस", इत्यादि - कुन चाहिँ उत्तम छ? उदाहरणका लागि, यदि फूलको बीउ, कुन एक लिन राम्रो छ? Aelita बजार लिएको छ, हामी केवल फूलको बीउ gavrish बेच्ने, तर ...
Actinidia। प्रिय बगैचा, तपाईं मध्ये नै पहिले नै बढ्छ? के तपाईं एक ठूलो लाना बन्न सक्नुहुन्छ? तिमीलाई उनको कस्तो परवाह छ?
एक्टिनिडिया। प्रिय मालीहरु, तपाईहरु मध्ये कती जनालाई पहिल्यै बढेको छ? के तपाईंले ठूलो दाखको बोट बढाउनु भएको छ? तपाई उसलाई कसरी हेरचाह गर्नुहुन्छ? मसँग act वर्षको एक्टिनिडिया कोलोमिक्टा बढ्दै छ। बढ्दो तंग, केवल अन्तिम जोडी ...
एफिड के हो?
एफिड्स के हो? पात कीटले एफिड खान्छ, एफिड गर्दैन। एफिड्स विभिन्न रंगका र orange्ग (ओरेन्ज, रातो, कालो वा हरियो) को एक ओभिड शरीरको साथ २ मिलिमिटर साइजको सम्मको सुख्खा कीट हो। सम्भवतः एफिड्स ...
हरी चमकदार कीड़े आक्रमणबाट कसरी साइजलाई सुरक्षित राख्नुहोस् 3-4 mm आकारमा? रसायन विज्ञान बिना। सबै जाडो खाओ।
Green- mm मिमी साइजको हरियो चम्किलो बगको आक्रमणबाट कसरी पनी रक्षा गर्ने? रसायनशास्त्र छैन। तिनीहरू सबै sorrel गब्बल। डाउनी फफूरो एक प्रकारको सामान्य रोग हो। यस रोग लाई रोक्नको लागि ...
मधुमेह mellitus मा अदरक बीउ कसरी प्रयोग गर्ने
मधुमेह मेलेतसमा रेडहेडको बीउ कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे ताम्र जुरुन्स्काया भन्छन्, “मैले रेडहेड (क्यामलिना), औषधीको बाख्राको रूवा (गालेगा) र शताब्दीको जडिबुटीको लागि रोजें। वैकल्पिक, म प्रयोग ...
TUIs कसरी चाँडै बढ्छ? यदि तपाईले सानो 20 हरू लिनुहुन्छ, केहि कारणको लागि, ठूलो 1.5s जुन वर्ष लगाइयो भने रूट लिइएन?
थजास कत्तिको चाँडो बढ्छ? यदि तपाईं सानो २० सेन्टीमिटर लिनुहुन्छ भने, केहि कारणले रोपेको ठूलो १.m मिटरले त्यो वर्ष रुट गरेन? Thuja एक इफेड्रा हो, सबै कोनिफर, पर्णपाती प्रजातिहरूको तुलनामा, जरा धेरै नराम्रोसँग। तसर्थ, जब अवतरण अनिवार्य क्षण हो ...
यो सत्य हो कि ब्ल्याक जैव्स प्रकृति मा अवस्थित छैन, र हामीले स्टोर मा बेचने वाला काले जैतून पेंट भयो?
के यो सत्य हो कि कालो जैतुनहरू प्रकृतिमा अवस्थित छैनन् र ती कालो जैतुनहरू जुन हाम्रो स्टोरहरूमा बेचिन्छन् र colored्ग हुन्छन्? कालो जैतुन पाकेको जैतूनलाई "जैतुन" भनिन्छ, र हरियो ...
चावल कसरी बढ्छ?
धान कसरी बढ्छ? http://ru.wikedia.org/wiki/Rice Rice (lat। or # 253; za) Cereals परिवारको वार्षिक र बारहमासी जडिबुटी वनस्पतिहरूको जीनस; खाद्यान्न संस्कृति। शीर्षक: चावल भन्ने शब्द १ th औं शताब्दीको अन्त्यमा रसियामा देखा पर्‍यो, व्युत्पन्न भएको ...
फनेल र डिल त्यही हो?
के सौंफ र डिल एकै चीज हो? सौंफ र डिल, चेरभिल, कोथिलो, जीरा, सौंफ एकै परिवारबाट। सौंफ एक पेटीओल मा विकसित हुन्छ। साग र बीउ सुगन्धित छन्। यो मा dill भन्दा फरक ...
Cornmeal के हो?
खाद्यान्न भनेको के हो? जनावरको खुवाउनका लागि खराब गुणस्तरको अन्न (घोडा, उदाहरणका लागि)। यो अन्न हो जुन प्यारामिटरको हिसाबले मानव पोषणको लागि उपयुक्त छैन, तर यो पशु खानपानको लागि एकदम उपयुक्त छ ...
चिया गुलाब - के त्यो रंग के हो? यदि सम्भव छ - एक फोटो।
चिया गुलाबको रंग के हो? यदि सम्भव छ भने - एक फोटो। चिया गुलाब पहेंलो रंगको फोटो एस सेमिना चिया पहेलो पहेंलो र आडूको बीचको रंग हो। पेस्टल गन्ध असाधारण छ! Adore ...
बर्तनमा ट्युबस कसरी विकास गर्ने?
भाँडामा कसरी ट्युलिपहरू राम्रोसँग बढाउने? ट्यूलिपलाई ठूला भाँडा चाहिन्छ। १ cm सेन्टीमिटर व्यास भएको कचौरा उपयुक्त छन्। पृथ्वी ढीला र बलौटे हुनु पर्छ। मिश्रणको लागि, तिनीहरूले गहुँ भूमि लिन्छ 13%, humus 30%, र ...
जाडोका लागि गुलाबहरू कसरी लुकाउने?
कसरी जाडो को लागि गुलाब कभर? सबै भन्दा राम्रो, Spruce शाखा! हो, यो राम्रो हुनेछ यदि तपाईं जहाँ बस्नुहुन्छ निर्दिष्ट गर्नुभयो! उदाहरण को लागी, यहाँ, प्राइमर्स्की क्षेत्र मा, मैले गुलाब काट्छु, १० सेन्टीमिटर छोड्दै ...
के कसैले रड्डल र फ्ल्यास प्रकारको टमाटर रोप्यो? आफ्नो प्रभाव साझा गर्नुहोस्
के कसैले रड्डल र फ्ल्यास प्रकारको टमाटर रोप्यो? लगाइएको रातो फ्ल्यासको आफ्नो प्रभाव साझा गर्नुहोस्। मुख्य कुरा बिरूवा बिरुवामा हतार गर्नु होइन, यो एकदम चाँडो बढ्छ, अन्यथा यो बढ्नेछ र जरा झन् खराब लिन्छ। यो हो…
अनानास र अनानास को स्वाद को स्वाद संग कद्दू को किस्महरु एक नौसिख मा बढ्न सक्छ। एक्स
तरबूज स्वाद र अनानास स्वाद संग कद्दू को किसिम के एक शुरुआत एस मा एक बढ्न सक्छ। x सब भन्दा स्वादिष्ट कद्दू जायफल हो। यो कद्दू को फल स्वादिष्ट मात्र हो, तर पनि धेरै ...
ONION SEVOK। उत्तम ग्रेड र फलदायी के हो? उपनगरहरूका लागि। धन्यवाद।
LUK-SEVOK। सब भन्दा राम्रो र धेरै उत्पादनशील प्रजाति के हो? मस्को क्षेत्र को लागी। धन्यबाद। स्टटगार्टन एक धारिलो प्याज होईन। साधारण मलाई स्ट्रिगुनोव्स्की मनपर्छ। रातो र सेतो प्याजमा निराश। तर म लीक्सको प्रेममा परें। त्यो वर्ष ...
कस्तो प्रकारको डिल छनौट गर्ने हो? अहिले तिनीहरुमध्ये धेरै छन्, आँखहरू ठूलो छनोटबाट भाग्छन्। वा शायद त्यहाँ कुनै फरक छैन?
कुन प्रकारको डिल तपाईंले छनौट गर्नु पर्छ? त्यहाँ अब धेरै छन्, आँखा एक विशाल छनौटबाट ओर्लन्छन्। वा शायद त्यहाँ कुनै फरक छैन? मैले धेरै डिल बीड किनेको छु र त्यो वर्ष यो एकदमै ...
SOS! कसरी लिपिबाट रोपण गर्नुअघि gladiolus बल्ब सुरक्षित गर्ने?
SOS! रोपण गर्नु भन्दा पहिले ग्लिडिओलस बल्बहरू कसरी थ्रिप्सबाट बचाउने? बल्बहरूको लागि तातो स्नान। पाभलोभ गिरावटमा, तपाईंले ग्लेडियोली बल्ब खन्नुभयो, तिनीहरूलाई सुख्खा पार्नुभयो र भण्डारणमा राख्नुभयो। तिनीहरूले राहत संग sighed - वसन्त सम्म ...
नाइट्रेट र नाइट्रिट्सबीच के फरक छ?
नाइट्रेट र नाइट्राइटहरू बीच के भिन्नता छ? एसिड अवशेष NITRATES, लवण र नाइट्रिक एसिड HNO3 को एस्टर। नुन - क्रिस्टल; मल, रंगाईका लागि दाग, विस्फोटकको कम्पोनेन्टहरू। अमोनियम नाइट्रेट्स, क्षारीय र क्षारीय पृथ्वी ...
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,544 प्रश्नहरू।